Baarlamaanka Turkiga ayaa si hordhac ah u meelmariyay dastuur cusub oo awoodo dheeraad ah siin doona madaxwayne Recep Tayyip Erdogan. - Magudhe news
Dadka go’aankan dhaliishan waxay sheegayaan in arrintani ay ka dhigan tahay in Erdogan uu awoodda maroorsanayo.
Dastuurkan cusub wuxuu ogolaan doonaa in madaxwaynuhu uu magacaabo ama shaqada ka eryo wasiirrada iyo in uu meeshaba ka saari karo ra’iisal wasaaraha waxayna arrintaasi noqon doontaa markii u horaysay taariikhda Turkiga.
Qodobada dambe ee dastuurka waxaa la ansixiyay xilli dambe oo Axaddii ah, xisbiga talada haya ee AKP ayaana helay tiradii xusbnaha baarlamaanka ee ay u baahnaaayeen.Dagaal ayaa baarlamaanka ka billawday todobaadkii hore ka dib markii uu xildhibaan damcay in uu duubo sida ay codayntu u dhacayso.
Previous Post14 saacadood ayey boolisku ku qaadatay inay dib gacanta ugu soo celiyaan xabsiga Alcacuz.Next PostQaraxyo iyo is-rasaaseyn saaka ka dhacday huteelka Dayax ee ku yaalla magaalada Muqdisho, ayaa lagu soo warramayaa in ayku dhinteen ku dhawaad 20 qof